Yaaliin Ajjeechaa Pirezidaantii Waldaa Macaa fi Tuulamaa (WMT) |
Home Afaan Oromoo Yaaliin Ajjeechaa Pirezidaantii Waldaa Macaa fi Tuulamaa (WMT)
Yaaliin Ajjeechaa Pirezidaantii Waldaa Macaa fi Tuulamaa (WMT)
Yaaliin Ajjeechaa Pirezidaantii Waldaa Macaa fi Tuulamaa (WMT), Obbo Dirribii irratti Raawatame!
Kamisa darbe halkan, jechuun, Hagayya 06, 2020 humnooti nageenyaa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa Pirezedaantii Waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan ta’an obbo Dirribii Damusee Bokkuu irratti yaalii ajjeechaa raawatuu HRLHAn mirkaneeffatee jira. Gochaan hayyuu Oromoo kan irratti raawatame baay’ee gaddisiisaadha. Gabaabumatt, sadarkaa hameenya mirga namoomaa bulchiinsi Abiy Ahmed sabboontota Oromoo irratti raawataa jiru ifatti kan agarsiisu dha. Akkuma beekamu, yeroo dhiyoo as duulli hidhaa fi roorroon adda addaa Abbootii Gadaa, Haadholii Siiqqee fi hayyoota Oromoo irratti bal’inaan raawatamaa jira. Keessattuu, ajjeechaa Artist Haacaaluu asitti ammoo Abbaa Gadaa G/Kibba Lixa Shawaa fi kan Wambaraa hidhamanii dararaaf saaxilamaa jiru. Gujjii fi Booran keessattis Abbootiin Gadaa fi Ayyaantuuwwan hedduun jumlaan hiraarfamaa jiran ni beekama.
Gochaa obbo Dirribii irratti raawatame waanti adda taasisu akka maatiitti sadarkaa lubbuuf isaaniif yaaddessuun itti roorrifamuu isaati. Ajaja mana murtii malee halkan waarii mana jireenyaa isaaniitti marsuudhaan sakatta’insa seeraan alaa raawatan. Obbo Dirribii fi maatii mara halkan sana qorra keessa mooraa manaa keessaa gadi yaasanii daandiirra garaadhaan ciibsanii reebicha hamaa irratti raawatan. Reebicha isaan irratti raawatame irraa kan ka’e obbo Dirribiin miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamaniiru. Yeroo sanatti guutuutti sadarkaa of wallaaluurra (unconscious) akka gahan himatu. Haadha warraa isaanii aadde Gaaromsee uleedhaan dugda keessa rukutanii lafatti kuffisan. Kana mara erga raawatanii booda obbo Dirribii irraa bilbila harkaa (mobile) isaanii fudhatanii deeman. Manguddoo ganna 70; nama bara jireenya isaa guutuu aadaa fi duudhaa Oromoo guddisuuf wareegama qaqqaalii kaffalaa turee irratti gochaa suukkanneessaa mataa ilmaan Oromoo gadi cabsutu raawatame. Jaarsi kun bara Dargii dabalatee bara Wayyaanee keessas Oromummaa isaaniif qofa yeeroo gara garaatti hidhaama kan turan yoo ta’u “Salphinni akka kanaa na mudatee hin beeku” jedhu. Obbo Dirribiin nama silaa badhaasnii fi kabajaan maleef malee akkanatti qe’ee ofii irratti salphifamuu hin malle. Garaa nama nyaata!
Gochaan kun marti osoo hin xiqqaatiin mucaa firaa isaan bira jiraatu reebicha hangana hin jedhamne erga irratti raawatanii booda halkanuma sana fuudhanii kan deeman yoo ta’u hanga har’aatti m/murtiitti osoo hin dhiyeeffamiin ‘Buufata Poolisii magaalaa Buraayyuu Lakk.3ffaa’ jedhamutti hidhamee jira. Maqaan dargaggoo kanaa ‘Haacaaluu Baqqalaa Gammachuu’ jedhama. Qorattoonni Buufata Poolisii Buraayyu 3ffaa “Haacaaluu poolisii federaalaatu “HADARAADHAAN” nu bira kaawate; dhimma inni itti to’atameef hin beeknu” kan jedhan ta’uu obbo Dirribiin nuu ibsaniiru.
Roorroo “mootummaan” Abiy Ahmed Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawataa jiru ummatni Oromoo biyya ambaa jiru akkasumas hawaasni idil-addunyaa baree akka balaaleffatu godhuun dirqama.
Via Miila Hinshokoksine, Hagayya 9, 2020
Warri Bilxigina yeroo darbe mana presedant WMT Obboo Diiribii Dammussee (Dirribii Bokkuu) waraanan itti marsite kan jedhutu haasa’amaa ture.
Hiriyoonnikoo qaamaan dhaqanii gaafatan akka natti himanitti, gaafa sana Obboo Dirribii irra midhaa qaamaa geessisanii jiru. Poolisoonni federaalaa galgala sana balbala isaanii cabsanii egga seenanii reebbicha hamaa irraan gahanii jiru. Sababa reebbicha sanaatiin qaamni isaanii baay’een miidhamee jira. Keessaattu miilii isaanii baayyee dhukkuba. Baay’ee danda’aanii hin dhaabbatani.
Yeroo reebicha irraan gahan sana, ati waraana mana keessatti dhoksitee jirta. Meeshaa waraanaas mana keessaa qabda fidi jedhanii akka isaan reeban himani.
Diqaaltichi ilmi Nafxanyaa Abiy Ahmed, akkasiin manguddoo keenya umurii isaanii qabsoo Oromootti fixan, dararaa, salphisaa fii qaamaa hir’isa jira.
Mormi Oromoo Diaspora
Previous articleOduu Injifannoo WBO, Arrest of Wolaita Leaders
Next articleHaala yeroo irratti marii Prof. Asaffaa Jaalataa fi Prof. Asfaw Bayyanaa